Dagaal u dhexeeya Ciidanka Seeraar iyo kuwa Axmed Madoobe oo ka socda Kismaayo & Safiirka USA oo ku sugan | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Dagaal u dhexeeya Ciidanka Seeraar iyo kuwa Axmed Madoobe oo ka socda Kismaayo & Safiirka USA oo ku sugan
Feb 12, 2020 - 18 Aragtiyood
Kismaayo ( Kalshaale ) Magaalada Kismaayo Waxaa ka socda dagaal u dhexeeya Ciidamada Maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe Hogaamiyo iyo ciidan taabacsan Cabdinaasir Seeraar oo ka mid ahaa Golihii Is bedel doonka Jubbaland, Islamarkaana sheegay in loo doortay Madaxwaynaha Jubbaland.
Dagaalkan ayaa yimid xilli maanta ammaanka magaalada Kismaayo si aad ah loo adkeeyay, iyada uu booqasho ku tagayay Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Soomaaliya Donald Yamamoto.
Wararka Qaar ayaa sheegaya in iska hor imaadka uu ka dhashay waddo ay xidheen Ciidamada Amniga Kismaayo, waxaa la sheegayaa in xidhitaanka wadada uu sabab u yahay isku dhaca labada Ciidan.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in is rasaaseynta ka socotay dhanka guriga uu degan yahay Cabdinaasir Seeraar oo ka mid ahaa Mas’uuliyiintii hore ee Jubbaland ciidamo ilaalo ahna ku Heysto halka uu degan yahay.
Dhinaca kale waxaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku sugan oo kulan uga socdaa Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo wafdi uu hoggaaminayo Safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto oo maanta booqasho ku tagay magaalo Xeebeedka Kismaayo.
Waa in lagu celiyo Xeryahii Qaxootiga ama wiilashii Galmudug la geeyo Kismaayo.
Sikale oo Kismaayo looga saarikaro Kuukuuyo maleh.
Saaxiib kuma fahmin wakhtiga g/mudug waa la soo dhaafay gudoomiye seeraar waa somali u dhashay juba waa muwadin somali ah dadka in uu hogamiyo xaq u leh wakhtigii dhixulaysada waa dhamaaday
Riyo hadday badhi leeyihiin dabadooda ayay ku dadan lahaayeen.
Kismaanyo inta aadan ka hadal horta
Xabsi guraga reer muqdisho ku jiraan iyo dhakxaanta wadooyinka ha la iga qaado dheh.
Labada canshuurood ee shabaab iyo dowlada mid ha la iga dhaaafo dhex.
Shabaab oon deegaanka aad ka timid haysta yaan wiilashayda gedo loo qaadin oo daarood wax kala riixanaya lagu layn dheh.
Bahdilaada siyaasiyiintayda halaga daayo dhe.
Batroolka dhulka maamulada hawiye ee la xaraashayo sharcigana loo samaystay boobka hala joojiyo dheh.
Sankadhuudhiga nagu mushaar qaata hablihiina wada meher xaday ma gayaane gurigoodii halagu celiyo dheh.
Labada qowsaa,Qatar iyo qodbasireedka Fahad Yaasiin ma ku qanin dheh.
Meeshaas daarood ku isku haysto maxaa ku daba dhigay.
Ma arligaad dhul aad sheegato ka wayday kkkk
War weyn ma ahan waa ciidan kala shakiyay.
Sidoo kale cadayn ayay u tahay in Jubaland maamul ka jirin waana lagu aadiyay in la tuso DHUCEEY cilinkan USA in meeshu maamul ka jirin.
Kama hadlin Mudug ee Kismaayo ayaan ka hadley, Tukaraq oo ayaa HADAL IYO HIILO KAAGA baahan Boowe.
20 Miles ha igu sheegine, 1000 miley igala sheekeyso Dabshidow.
Tukaraq wiilashii labaa baa jooga ama Calan somaliland ha taagten ama mid Puntland kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Kismaanyo shir weyn ayaa ka socda u dhexeeya Madoobe ,Yamamoto ,James Swan iyo saraakiin ka socda Africom.
Kooxda villada oo kaashanaysa Seeraar ayaa si shirkaa tashwiish loogu furo waxay soo qabanqaabiyeen dad mudaharaada.
Markii ay dad waayeen ayaa wiilashii Seeraar waardiyaha u ahaa tuutaha inta laga soo dhigay dad mudaharaadaya loo ekaysiiyey. Waxayna iska caabbin kala kulmeen ciidamadii jidgooyooyinka dhigay saaka si shirkaa ammaankiisa loo adkeeyo.
Kuwa soo qoraya dagaal baa ka dhacay Kismaanyo wa kuwii ku hungoobey isku daygaas oo dagaal danka warbaahintaa soo qaaday kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Daaroodnimo hadey jirto Laascaanood ayaan ka dareemilaheyn
Kismaayo waxaa isku heysto DADKA CAANAHA IYO COWDKA KEENO iyo KUUKUUYO KENYA KA SOO DUUSHEY (Kabo- qaad sheegid maleh)
* Shaxaad doon iga dheh
Harti Daarood Kaftankoodu wuxuu Xirmey 2018, waa hadduu damiir dadnimo KU HADHAY.
– 6 Bilood oo daarood aruurin ah
– 6 Bilood oo xoolo aruurin ah
” Ayaamahaan ayaan u jeeday DENI oo aruurin HOWLGABKII Dowladdii Kacaanka,
‘Aan sugno waa intaas oo ay dhaamaan sidii horee
– Kismaayo maahan Tukoraq ee Tanaagada iyo Shaxaadka naga daaya
Bal noo sheeg qolada caanaha keenta oo daarood kismaayo ku haysata oo dagaalkooda laga fadhiyi la’ yahay.
Mrintuba waa ilma daarood cid kale oo dagaali karta meesha ma majoogtaa
intuba waa ilma daarood cid kale oo dagaali karta meesha ma majoogtaa
Waa yaab kkk
Ogaadeen iyo Kismaayo iskuma eka kk
Meesha waa meel la bililiqaystay.
Waligeed waxay meel degan oo barwaaqo ah.
Waa geelinii iska raaca oo meesha nooga taga.
Codka Somali nation.
Waa ILLAAHAY mahadii in Ksmaayo uusan dagaal ka dhicin sudeey jeclaan lahaayeen kuwo halkan wax ku soo qora.
Inta Xalka Jubbaland laga raadinayo 1000km meel u jirta wax Jubbaland la yidhaahdo ha sugina… Xalka Jubbaland Geduu yaal, Gedona diidday Jubbaland Garoowe laga hago…
Seeraar iyo Xiddig ayaa xaq ku taagan marka loo eego A.Madoobe team, waayo waa niman raba in la dhiso Jubbaland la wada leeyahay oo aan caqabad ku noqon geeddi socodka qarannimada Soomaaliya…
WAXAAN LA YAABAY FARMAAJO SIDAAS UU M/GOBOLADEEDADA ULA DAGAALAMAYO EE UU MEEL WALBA DABKA KAGA SHIDAYO MUU ALSHABABKA & ISIS-ta ULA DAGAALAMO!!!!.
ULAMA DAGAALAMI KAROO ISIS,ALSHABAB WAXAA WATA CIA,MI6,MOSSAD.iwm.
FARMAAJO WAXAN LEENAHAY:SHAME ON YOU.
AFBUUXA WAXAAN KU DHAHAYAA: